Puntland oo xabsiga kasii deysay wadaad laba bil sharci darro ugu xidhnaa xabsiga wayn +Nabadoon iyo Ganacsade wali xidhan. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ November 11, 2019 ] Deni Iyo Dhoobo Ayaa Sharciga Jabiyey W/Q:Axmed	Faalloyinka
[ November 10, 2019 ] DAAWO VIDEO:Hanjabada Sheekh Shariif “Walahi Tuma Walahi Waan ka Saarayna Farmaajo Muqdisho”	Maqal Iyo Muuqaal
HomePuntlandPuntland oo xabsiga kasii deysay wadaad laba bil sharci darro ugu xidhnaa xabsiga wayn +Nabadoon iyo Ganacsade wali xidhan.
Puntland oo xabsiga kasii deysay wadaad laba bil sharci darro ugu xidhnaa xabsiga wayn +Nabadoon iyo Ganacsade wali xidhan.
August 9, 2019 marqaan Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 2
Dowladda Puntland ayaa xabsi ku yaalla magaalada Boosaaso ka sii daysay wadaad kamid ahaa saddex nin oo ciidamada Amniga Puntland ay horraantii bishii June ee sannadkan ka qabteen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Wadaadka oo lagu magacaabo Sheikh Siciid Cabdiraxmaan Maxamed iyo labada nin oo kale ayaa la qabtay kadib markii sida la sheegay ay abaabuleen shir ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo magac beeleed lagu qabtay loogana dhaawaqay ku dhaqanka Shareecada Islaamka.
Labada nin ee wadaadka lala xiray oo magacyadoodu kala yihiin Ganacsade Maxamed Yaasiin Caabbi iyo Nabaddoon Deeq Cabdi Cabdulle ayaa weli lagu hayaa xabsi ku yaalla magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland.
Wadaadka la sii daayay iyo labada nin ee weli xabsiga lagu hayo oo xarigooda ay ka soo wareegtay mudda laba bilood ah ayaan mudadaasi wax maxkamad ah la geynin.
Akhriso:- DF oo soo saartay bayaan ka kooban lix qodob oo qeexaya xogta qaraxii dowladda hoose
Beesha caalamka oo war culus kasoo saartay xaaladda cakiran ee Junbaland.
Qofkii ummada iyo dalkooda ammaankooda wax u dhimaya way banaan tahay in la xiro oo la marsiiyo waxuu mudan yahay.Hase ahaatee ninka hadda kor muuqda waxa dambiga looga dhigay ma aha dambi.Waxaa ninkaas lagu dacweeyey in uu abaabulay shir ay lahayd beeshiisa hoose oo ay beeshuna ku heshiisay in ay ku dhaqmaan Diinta Ilaahay (swt).War goormay dambi noqotay waxaan qaadanay ku dhaqanka diinta Islaamka?War waxaa dambi ah wixii wax u dhimaya dadka iyo dalka.Ninkaas waa la oran karay war see bay beeshiina kaliyu ugu dhaqmaysaa shareecada Islaamka?Saan qabo ninkaas ma ahayn in lagu xiro inta la sheegay.Wayse dhicikartaa in ay jiraan arimo kale oo an la sheegin.
Atoore sxb asaga iyo beeshiisa dadka kale fadli iyo ka taqwo ma dheera markaas waxii beel keliya bulshada inteeda kale diinta magaceeda kaga takooraaya maaha wax la yeeli karo. Sidaan aqaano shareecada diinteena ruux kasta kama fadwoon karo sxb oo culumo sare maahanee hadii kale qas iyo jaha wareer baa bulshada ku dhacaaya.
DAAWO MUUQAAL XASAASI: ‘‘Puntland waa in la qabtaa Shirweyne dib u saxid ah, si qaladaadka loo saxo‘‘! waxaa sidaa yiri